अत्यन्तै दुखको खबर ! डाक्टरले गरे दुई सन्तान र श्रीमती’को ह त्या, ओमिक्रोनको डर’ले ह’ त्या
काठमाडौ : एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमती’ को ह’ त्या गरे’का छन् । भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घ’टना घटे’को भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जनाएका छन्।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमती’को ह’ त्या गरे’का हु’न्।
उनले ह” त्या’पश्चा’त आफ्ना भाइ’लाई प्र’हरी बोलाउन म्यासेज गरेको बताइएको छ। प्रहरी त्यहाँ पुग्दा डा. सुशील भने फ’रार भइसके’का थिए।
प्रहरीले एउटा नो’ ट बरा’मद गरेको छ। जस’मा लेखिएको छ- ओ’मिक्रोन’का का’रण मै’ले ह’ त्या ‘गरेँ। अब यिनीहरु’को श’व ग’न्नु प’र्दैन।
त्यस्तै गुजरातमा कोरोना’भाइरसको नयाँ र अधिक खतरनाक संस्करण ओमिक्रोन (ओमिक्रोन) को प्रवेशले हल’चल म’च्चाएको छ। ओमिक्रोनको पहिलो केस गुजरातको जामनगरमा फेला परको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका एक व्यक्तिलाई यो घा’तक भेरियन्टबाट संक्र’मित भेटिएको छ।
उनीहरुको आरटी–पीसीआर अर्थात् कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट पुणेको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । शुक्रबार जानकारी दिँदै गुजरातको स्वास्थ्य विभागले भन्यो कि जामनगरमा बाहिरबाट एक ब्यक्ति आइपुगेपछि उनलाई कोभिड-१९ को ओमिक्रोन नयाँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन उनको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाइएको थियो ।
ओमिक्रोनका कारण तेस्रो लहर आउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा उठिरहेको छ । यसबारे भारत सरकारले ओमिक्रोन भारतलगायत अन्य देशमा फैलिन सक्ने बताएको छ
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार ०१:३६ 1 Minute 135 Views